I-Boomerangs: Ungazakha njani kwaye uzisungule- Ikkaro
yokuqalisa >> Boomerangs
I-boomerang yinto ethi, emva kokuba iphoswe, ibuyele kwindawo yayo yemvelaphi ngenxa yeprofayile yayo ekhethekileyo kunye nemilo yokwazisa. Nawuphi na umbandela uvumelekile ukwakha i-boomerang: ukhuni, iplastiki, ikhadibhodi, icarbon fiber, ialuminium, njl.
Isebenza njani i-boomerang
Bangathatha phantse nayiphi na imilo kwaye kufuneka baziswe ukuze bajikeleze kwi-axis yabo.Ukuphakanyiswa emoyeni kungenxa yemilo yeebhleyidi, ezithi, kunye neprofayile efanayo naleyo yamaphiko enqwelomoya, "Ukuhlasela" umoya njengoko i-boomerang ijika kuye kwaye ihambe. Indlela yokufuduka izimele kwisantya somgama kunye nesantya esijikeleza ngaso i-axis yaso kwaye ihlala ihleli kwi-boomerang nganye. Oku kuyenzeka kuba ngelixa i-boomerang ijikeleza kwi-axis yayo kunye nenkqubela phambili, incakuba ejikelezayo ngalo mzuzu kwicala lokuhamba kwe-boomerang ixhasa ngaphezulu kwalowo ngelixesha ujikelezayo ujonge kwicala eliphambili ukuya phambili, apho I-torque iveliswa okanye i-gyroscopic precession ngaloo ndlela.
Ii-Boomerangs ke zinokuba nalo naliphi na inani leebhleyidi. Iibhloko akufuneki zilingane okanye i-boomerang symmetrical; Kukho ii-boomerangs ezimile njenge-V, W, kunye neebhleyidi ezintathu, iiblade ezisasazwa njengeehelikopta, ezimile njengekhangaru, ufudo, intlanzi, njl. Okwangoku ukusetyenziswa kwezemidlalo kwe-boomerang kuxhaphake kakhulu, kukho ubuNtshatsheli bamazwe aphesheya apho, ngokuziphatha, indlela yokuyibamba, ukuchaneka kwembuyekezo, ixesha lokubaleka, inani "lokubambisa" ngexesha elinikiweyo okanye umgama ihamba ngaphambi kokuba ibuye, inike imizekelo eliqela.
Ayizizo zonke izinto zakudala ezibizwa ngokuba yi-boomerang ezibuyela kwisiqalisi: ezo zazisetyenziselwa ukuzingela ngabemi baseAustralia abangabuyanga kwaye amagama abo ayengeyo-boomerang, kodwa kylie.
I-boomerangs ezibuyayo azange zisetyenziselwe ukuzingela okanye umlo. I-kylie yayeka ukusetyenziswa xa kwafakwa obunye ubugcisa bokuzingela njengezaphetha kunye neentolo.
I-Boomerangs ayiyiyo i-Australia kuphela; indala kunayo yonke eyathi yaziwa ukuza kuthi ga ngoku yafunyanwa ePoland ngo-1987 kwaye ubudala bayo budlula iminyaka engama-20.000 XNUMX. Bafunyenwe kumazwekazi amahlanu, babekho nakwingcwaba likaTutankhamun, ngaphezulu kweminyaka engamawaka amathathu eyadlulayo.
Ukusetyenziswa okuphambili okunikwa ii-boomerangs kwi-Egypt yakudala kwakunjengompu.
Uyenza njani i-boomerang ngemitha yeplanga
Ewe; Ndiyazi ukuba ividiyo ibhalwe ngesiNgesi, kodwa ukuyibona uyakuqonda ngokugqibeleleyo inkqubo yokwakha le boomerang, ... Qhubeka nokufunda
Uyenza njani iphepha le-boomerang
Iividiyo ezintathu zokufundisa indlela yokwenza iphepha elincinci le-boomerang.
Ilula kakhulu, kodwa iyasebenza, nangona kuya kufuneka ndilumkise ukuba kunzima ukufumana indlela yokuphosa emva. Sukulindela iziphumo ezinjengezo ze-boomerangs ezenziwe ngomthi okanye ezinye iintengiso, kodwa njengomdlalo ongacwangciswanga entlanganisweni okanye ukuba abantwana bawudlale kuhle kakhulu.
Ndizuze uluhlu olumalunga nama-30 ukuya kuma-40 cm. Ungazama ukuzama ukubona ukuba ungoyisa na ;-)
Ndikushiya iividiyo ezininzi, nangona inokwanela, kuba umsebenzi ulula kakhulu ukuwenza, nangona kungenakufunyanwa iphepha le-boomerang ndibuyele kuwe.
Iimpawu zeBoomerang zikaPierre Kutek
Eli khonkco lilandelayo linempembelelo kwihlabathi le-boomerangs kangangokuba ndicinga ukuba lifanele isithuba sokuligqamisa.
Abo baqala njengam, okanye banomdla kufuneka bajonge. Iingcali zeBoom ziyayazi ngokuqinisekileyo, kodwa ingumthombo oqhelekileyo wesalathiso.
Yiwebhu ye UPierre Kutek apho sinokufumana khona idathabheyisi yezicwangciso ze-boomerang ngamakhulu ezicwangciso ezikhoyo
Akuthandabuzeki Ukudityaniswa okungcono kokudutyulwa kwee-boomerangs onokuyifumana kwi-intanethi.
I-Boomerang eneCD okanye iDVD
Bathi ukungazi kunqabile…. kwaye ubungqina beli lilinge lam loku Yakha i-boomerang ene-cd, ethe yavela ukuba ibe yintsilelo epheleleyo.
Kodwa enkosi kwigama lam elivule ibhlog, iBoomeralia icetyiswa kakhulu, siyazibona izicwangciso kunye nomzekelo we-boomerang one-CD
Kwaye ndithatha ilungelo lokudlala iCD / iDVD
Yiyo Ukunyuka kukaStanislaus, Andikamazi ukuba ungubani kwaye ndingathanda ukuba kubhekiswe kubani
Yakha i-boomerang nge-CD (Ukusilela)
Ndifunde kudala ukuba unga cYakha kwakhona i-boomerang isebenzisa iCD, kwaye kunokwenzeka ukubhabha ngeradiyo eyi-1 m kwaye kufuneka ndiyivavanye.
Ngaphambi kwayo nantoni na nasemva kwam ukusilela kwangaphambili ukwakha i-boomerang Kuya kufuneka ndikulumkise ukuba nalo akahambi.
Ukwakha i-boomerang 1
Kudala ndifuna ndenze i-boomerang yam. Kukho iiwebhusayithi ezinezicwangciso ezineenkcukacha kunye neenkcazo malunga nezinto eziza kusetyenziswa kunye nendlela yokwakha.
Kodwa njengesiqhelo, kuye kwafuneka ndibonakalise into endiyibeke entlokweni yam, kwaye amava nangona abantu abaninzi becebise ngokuchasene nayo.
Bendingazukuyipapasha le posi, kodwa njani iimpazamo zixhomekeke, nantsi ifayile ye- ukuzama ukwakha i-boomerang emhlophe-enomsila.
Umbono ulula kakhulu. Ndine boomerang, Ndenza isikhunta kuyo kwaye emva koko ndiyigcwalise ngeglue emhlophe.
Ungayiphosa njani i-boomerang
Nangona kule bhlog imixholo yeyantlandlolo okanye ngokudibanisa kwethu, senza okungalunganga ukuthumela eli nqaku ngendlela yokuphosa i-boomerang endicinga ukuba ibalulekile kubo bonke abo bafuna ukuqala kulo mdlalo wokuzonwabisa / kwezemidlalo.
Nantsi ke ihamba….
Inqaku kunye neefoto ezithathwe kwi-boomeralia. Ukusuka apho bavumela ukuveliswa kwakhona kwenqaku.
Ukubanjwa ngendlela othanda ngayo ukuba indawo ethe tyaba ingaphandle. Ayinamsebenzi ifosholo, nokuba ineminwe emibini okanye sonke isandla. Kuya kufuneka ubenakho
Yityhalele phambili nzima kakhulu
Yinike ujikelezo olwaneleyo, eyona nto ibaluleke kakhulu kwaye inzima ukuyiprinta ngokujikeleza
Siza kuyibamba imvucuts njengoko sifuna, okoko indawo ethe tyaba ingaphandle kwaye indawo egobile yeyona ikufutshane ebusweni bethu. Nawuphi na umbambiso esiwenzayo usebenza nje ukuba sinika amandla aneleyo. I-boomerang ibanjwe yinxalenye ye-convex ebhekise kubadubuli. Inxalenye ethe tyaba ihlala ingaphandle. Lo mzobo sisandla sasekunene
Ukwakha kunye nokubhabha i-boomerang
Masizame Yakha i-boomerangNangona isisiseko, inendiza efanelekileyo kwaye iya kusifundisa izinto malunga ne-aerodynamics esinokuthi siyisebenzise kwezinye iiprojekthi.
Yintoni i-boomerang? Ngokusisiseko iphiko elithe ngenxa yobume balo, iprofayili kunye nohlobo lokumiliselwa esikwenzayo, siyifumana ibhabha kwaye ibuyela kuthi. Kutheni lento isenzeka? Ngokumisela ngokufanelekileyo iiprofayili zamaphiko, sikwazile ukuvelisa uxinzelelo olusezantsi kwinxalenye ephezulu nangaphezulu kwinxalenye esezantsi, ngaloo ndlela senza oko kubizwa ngokuba sisiphumo sokuphakamisa "ingathi sitshintshe isimilo somxhuzulane". kusetyenzwa ngcono ngayo kwelinye inqaku elinokubizwa Kutheni iinqwelo-moya zibhabha?